बस्नेत र शाहीलाई ‘झगरीलाल वाग्ले स्मृती’ पत्रकारिता पुरस्कार – Sadarline
कोहलपुर (बाँके) : बाँकेका दुई पत्रकार ‘झगरीलाल वाग्ले स्मृती’ पत्रकारिता पुरस्कारबाट पुरस्कृत भएका छन । वाग्लेको प्रथम स्मृती दिवसका अवसरमा सो पुरस्कार बितरण गरिएको हो ।
प्रेस संगठनका केन्द्रीय सदस्य एवं नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका उपाध्यक्ष प्रदिप वाग्लेले आफ्ना दिवंगत बुवाको स्मृतीमा स्थापना गरेको ‘झगरीलाल वाग्ले स्मृती’ विकास पत्रकारिता पुरस्कारबाट राससका स्थानीय संवाददाता तथा हाम्रो समाचार दैनिकका सम्पादक भेषराज बस्नेत र झगरीलाल वाग्ले युवा पत्रकारिता पुरस्कारबाट स्थानीय मिसनटुडे दैनिकमा कार्यरत डिल्ली शाही पुरस्कृत भएका हुन् ।
बिकास पत्रकारिता पुरस्कारको राशि ६ हजार र युवा पत्रकारिता पुरस्कारको राशि ४ हजार रहेको पुरस्कारको संरक्षक प्रदिप वाग्लेले जानकारी दिए ।
प्रेस संगठन संगको सहकार्यमा वाग्लेले स्थपना गरेको पुरस्कार हरेक वर्ष बाँकेका २ जना पत्रकारलाई प्रदान गरिने छ । घोषित पुरस्कार हरेक वर्ष जेठ १८ गते स्मृती दिवसका दिन बितरण गरिने भएपनि बिशेष परिस्थितिका कारण आईतवार प्रदान गरिएको थियो ।
प्रेस संगठन बाँकेका अध्यक्ष डक्ट धितालको अध्यक्षता तथा नेकपा बाँकेका अध्यक्ष आईपी खरेलको प्रमुख आतिथ्यतामा आयोजना गरीएको कार्यक्रममा नेकपा बाँकेका सचिव अशोक कोइराला, प्रचार बिभाग प्रमुख प्रमोद धिताल, प्रदेश कमिटी सदस्य नरेन्द्र न्यौपाने, नेकपा क्षेत्र नं. १ का संयोजक सुर्य ढकाल, नगर कमिटी अध्यक्ष बसन्ती अधिकारी, नेकपाका नेता अब्दुल हुसेन खाँ, अबराज खड्का, प्रेस संगठनका केन्द्रीय सदस्य रुद्र सुवेदी, विष्णु बेलबासे, पत्रकार महासंघ ५ नं. प्रदेशका सदस्य शिव सुनार, प्रेस संगठन बाँकेका सहसंयोजक हेमन्त विकलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
सदरलाइनडटकम, नेपालगञ्ज : कोबिड–१९ नोबल कोरोना भाईरसको महामारीबाट जोगिन आव्हान गरिएको लकडाउनको ७६ औ.दिन बितेको छ । भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन आव्हान गरिएको लकडाउनको कारण सबै क्षेत्र अस्त ब्यस्त छ । बाँकेमा भाईरसको संक्रमण तीब्र गतिमा फैलिएको कारण स्थानीय प्रशासनले लकडाउनलाई कडा पार्ने निर्णय गरेको छ । सबैलाई जोगाउन आव्हान गरिएको […]
१४ भाद्र २०७६, शनिबार १८:३१